China XB-019, Aluminom Wheel, otu wheel, Bosy's Bike emepụta na ndị na-eweta | Xuxiang
XB-019 etiti High carbon ígwè ịgbado ọkụ etiti. Ihe mkpuchi aka na-adịghị amị amị na nke na-adịgide adịgide, saddles na-eku ume na nke na-agaghị eyi, taya gbasapụrụ agbachapụ, na agba gburugburu gburugburu iji chebe uto dị mma nke ụmụ ọhụrụ! Ịgba ịnyịnya ígwè ndị mara mma na-eme ka ụmụaka nwee mmasị ịnya ịnyịnya na egwuregwu!
XB-019 dị fechaa ma na-adịgide adịgide. breeki caliper n'ihu na brek na-ejide azụ maka nchekwa agbakwunyere na ọnọdụ ihu igwe niile. Ogwe aka na-agbanwe agbanwe na ịdị elu oche maka ụmụaka na-eto eto. ejiji mudguard na-eme ka ụmụaka nwee igwe kwụ otu ebe pụrụ iche ma dị jụụ!
The XB-019 eji maka elu carbon ígwè etiti, mkpuchi mkpuchi, Caliper breeki / njide breeki, zuru yinye mkpuchi, ígwè crank, PVA ọzụzụ wheel, 10g yi okwu, elu àgwà saddle, n'ihu aluminum alloy karama, 2.125 taya, mara mma na-ese, na elu ihe mmado..
agba Red, Yellow, Blue, Black, ma ọ bụ dị ka mkpa gị
Ntọhapụ ngwa ngwa Aluminom
Nke gara aga: XB-020, 12 14 16 18 20 inch igwe kwụ otu ebe 4 agba.
Osote: XB-018, Onye nrụpụta Chian, ọnụ ala dị ala,
XB-009 igwe kwụ otu ebe, nkata ihu azụ ...
XB-005, igwe kwụ otu ebe, mgbịrịgba na nkata,...
XB-007 / ọhụrụ imewe 6-12 afọ ụmụaka igwe kwụ otu ebe ezi qua ...
XB-013, Aluminom Wheel, sadulu nwere isi iyi